Shiinaha SUS304 Heerka 10 madaxa warshadaha miisaanka badan leh iyo kuwa wax soo saara | Smart Miisaan
10 head multihead weigher waa xulashada qiimaha-ku-habboon ee cunnada fudud, nacnaca, galleyda, digirta, cuntada la qaboojiyey, bariiska iyo wixii la mid ah.
Nidaamka Xakamaynta: Nidaamka kontoroolka casriga ah
65 bac / min
10 qiyaasta madaxa badan ee madaxa waa qaabka iyo dhaqaalaha. Waa xulasho wanaagsan ganacsiga cusub.
• Waxay leedahay 1,024 nooc oo iskudarka miisaanka.
• Saxanka quudinta naqshadeynta ee caadiga ah ayaa u jilicsan cuntada fudud, nacnaca iyo alaabada kale ..
• Saxarka Palin ama saxan bir ah oo loogu talagalay alaabada leh astaamo kala duwan.
Smart Weigh wuxuu bixiyaa aragti 3D u gaar ah (aragtida 4aad sida hoos ku qoran)
Hore: Isku dar ah SUS304 24 wejiher madax wejiga oo dhan
Xiga: 1 Head Linear Weigher SW-LW1
Nidaamka xakamaynta qaybsan waxaa loola jeedaa nidaamka xakamaynta guddiga. Guddiga hooyadu waxay xisaabiyaan sida maskaxda, mashiinka mashiinka kontaroolada mashiinka shaqeynta. Miisaaniyadda wejiyada badan ee Smart Weigh waxay isticmaashaa nidaamka xakamaynta casriga 3aad.
1 koontaroolka guddiga wadida 1 hipper feed iyo 1 cupper ah. Haddii ay jirto 1 hopper jabtay, ka mamnuuco qoob-ka-baxa shaashadda taabashada. Xaraashka kale wuxuu u shaqeyn karaa sidii caadiga ahayd.Iyo guddiga wadistu waxay caan ku yihiin taxanaha taxanaha miisaanka 'Smart Weigh'. Tusaale ahaan, maya.
2 guddi wadis ayaa loo isticmaali karaa maya. 5 guddiga wadayaasha. Waxay ku habboon tahay keydinta iyo dayactirka.
10 miisaan culus